DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay xaalada dalka, & Shirkii Golaha Wadatashiga – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay xaalada dalka, & Shirkii Golaha Wadatashiga
January 11, 2022 Xuseen 14
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo jeediyey khudbad ku aaddan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka, ayaa Madaxda Dowlad-goboleedyada dalka ku adkeeyey hirgelinta jadwalka doorasho ee ay isla qaateen.
Madaxweyne Farmaajo oo ka war-bixiyey guulaha la taaban karo ee laga xaqiijiyey dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku bogaadiyey sida naf-hurnimada leh ee ay u difaacayaan Dalka iyo halgankooda ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ee caadeystay daadinta dhiigga iyo burburinta hantida shacabka Soomaaliyeed.
Ma madaxweynihii jamhuuriyada Soomaaliya (min Lawyacaddo illaa Liboye-Somalia) baa “aakhirkii” soo hadlay?!
Marka hore, waan bogaadinayaa hadal-jeedinta madaxweynaha qaranka, xilli aad loogu baahnaana way ku soo beegantaya. Waxa aadna mooddaa in madaxweynuhu qaatay taladaydii & canaantaydii ahayd in uu dadka la hadlo, oo aan la joogin xilli la aammusnaado.
Tan labaad, waxa aan rabaa in aan isdul taago qoddobo gaar ah oo aan u arkay in wax laga yidhaahdo. Madaxweynaha sharafta lihi waxa uu isdul taagay dhismaha ciidamada, xuquuqahooda & in ay diyaar u yihiin hanashada & la wareegidda ammaanka guud ee waddanka, iyaga oo u qalabaysan in ay kala wareegaan AMISOM. Qodobkan oo u muuqda in uu jawaab u yahay qodobkii 17aad ee dhowaan soo baxay, kaas oo aad loogu duray ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya.
Waxa kale oo uu madaxweynaha qaranku dul istaagay in aan cidna laga yeelaynku takri falka hantida danta guud, waxa uunna mar labaad faray hay’adaha dawladda ee ku shaqada lihi in ay ilaaliyaan hantida danta guud, khaasatan xilligan kala guurka ah. Qodobkani waxa uu daba socdaa eedayntii wasiirka koowaad, ee lagu soo eedeeyey ku takrifal hanti dan guud. Arrinkaasi wali waa taaganyahay, wax badanina way ka jiraan sida uu qiray Bashiir-goobe.
Madaxweynaha qaranku waxa kale oo uu si ayiday qodobadii ka soo baxay war murtiyeedkii madasha qaranka, ee dhowaan soo baxay, khaasatan kuwa khuseeya malxiisaynta, isaga oo xusay in ay ku qotomaan heshiiskii labada gole m,aray ee 17 September.
Waxa kale oo madaxweynaha qaranku ka digay in la carqaladeeyo hannaan socodka malxiisaynta oo lagu qabto xilliga loo muddeeyey, isaga oo faray in maamuulladu ay doorkooda qaataan.
Madaxweynuhu waxa uu intaas dabadhigay walaac uu ka qabo in cagajiid & isqabqabsi siyaasadeed oo horleh lagu hor gudbo hannaan socodka malxiisaynta. Qodob kan & kan ka korreeyaba waxa ay taabanayaan arrin waaqici ah oo haddaba muuqata, waayo iyada oo hadda lagu soo heshiiyey geeddi socodka malxiisaynta oo isla markaana la muddeeyey baa Xamar laga abaabulayaa “kacdoonno qabiilaysan” oo aan la garanayn jiho ay haystaan, aan ka ahayn in malxiisaynta/caruusaynta lagu carqaladeeyo sida madaxweynuhu uu ka digayo. Bal idinku isqabadsiiya, doorashaa loo dareeray & kacdoon baan wadnaa?!
Inta kale ee hadal jeedinta madaxweynuhu waxa ay aniga iigu muuqatay qayb ka mid ah ololihiisii doorashada.
Gunaanadkii, madaxweynuhu waa ku mahadsanyahay hadal jeedintiisa. Haddaba, qolyaha kacdoonka & barakicinta ka wada Muqdisha waa in ay caddeeyaan cidda ay u shaqeeyaan maaddaama labadii garabba soo dhoweeyeen heshiiskii dhowaan la gaaray ee geeddi socodka malxiisaynta.
Wax garadka reer Muqdishoow xil baa arrinkan idinka saaran ee ka hadla oo haka aammusina. Miyaad ku raacsantihiin mise waad ka soo horjeeddaan? Haddaad ku raacsantihiin, waa maxay ujeeddadiinu?
1 Dalka waxaa ka jira Abaaro siweyn u saameeyey Soomaliya sooman hadal qaadin taa oo shacab badan u arkaayeey in uusan Dalka uu madaxweynahiisa sheeganaayo warba u heynin
2 Dagaalada Dalka ka jira ay Alshabaab ku qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan Galmudug kuna laayey Saraakiil sar sare oo Dalka iyo Dad wax tar u ahaa mana u Tacsiyeenin
3 Dagaalo qabiileyd Dalka ka jira dad badan oo Soomali ah dhinteen kuna Barakaceen kuwa ka dhacay Galmudug , Puntland iyo meelo kale oo Dalka ka mid ah
4 waxaa jira qilaaf weyn oo hareeyey Dalka sida kan u dhaxeeyo isaga iyo Ra iisal wasare Rooble marna sooma hadal qaadin
5 waxuu soo hadal qaaday tan qob weynida taa oo tusaalo ugu filin in Doorashadiin Qaranka ay garwadeen ka ahayeen Beesha Lixaad
Waxuu ka hadlay Ciidanka Soomaliya iyo dib u dhiskiisa taa oo sidoow sheegay Cadowga in ay la diriraan loo sameeyey iyadoona Ciidanka Tiradaa ah aysan Dalka ka saaran cadowga uu ku soo qaatay qudbadiisa taana badalkiisa ay tahay in Caawa Xafiiskiisa iyo Kan Ra iisal wasaraha Ciidamo Amisoon kala ilaalinayaan
Hadaba Dadka inta badan ayaa u arkaayey qudbadaasi mid loo arkaayey in uu shacabka ka jeediyo arimaha Siyaasada ee Dalka ka jira taa oo hada mareysa meesha ugu hooseysa ebid
Hadaba waxaa iswediin tu tahay Farmaajo malaha miyaa la taliyaal hago mise isagaa isku filin?
Marian Ciise says:
Hillaac wasakh, hadalkiisii waa kii Dhulbahante ee Siyaad Barre guulwade nimo la hoos joogeen, Marexaan bay hoos joogaan, meeshan bay u barteen, naageynta waa dhaqankooda ilaa Sayyidkii, meel isma soo taagi karan, karti malaha ay ku tashadaan, naagaynta iyo futo ka leefka Mareexaan bay yaqaanaan, yaa wax kaa maqalaya, adeer Puntland iyo Somaliland baad hoos joogtaa sidaas baanad ahaan, Farmaajo isaga ayaa tiisii u liita, miskiin
War gabareey af adkidaa oo xishood yaridaa magac dumar baadba leedahaye?!
Kkk kkk at kii yaa caawo xabsiga kasoo daayay waxaan ogaa isagoo maxbuus ah oo xitaa warbaahinta laga mamnuucay sidii Donald Tramp kkk dhidir onkad kiciyay sidiisii ayuu soo baraarugay kadib laba asbuuc oo xabsi guri ah kkkk kkk danbaa u runsheegtay gidaarkaana soo celiyay Farmaajo waa faaruq maran oo liita waa dabadhilif u adeega Abi Oromo iyo Afwargi. Farmaajo siyaasada somaliya boos ugama banaana waana loo quus gooyay.
Kkkk Hilaac adeer cuqdad qabiil baa kaasoo uraysa ee Farmaajo isaga weye tuuga ugu wayn ee u baahan in dalka laga qabto Farmaajo is waa musuqa aabihiis iyo hooyadiis waa xaraami aan xalaal ku dhalan oo dabadhilif ah. Farmaajo waa dhidir onkad kiciyay laba asbuuc oo uu xabsi guri ku jiray ayuu soo toosay isagoo laga tashaday oo sanka laga wada qabsaday muslim iyo gaaloba. Farmaajo dalkan wuxuu dib ugu ceshay 1991 5 sano oo bur bur iyo balaayo ah oo Farmaajo baday dalkan iyo dadkaan ayaa wali lala daalaa dhacayaa miinooyinkii uu aasay ayaa wali lagu halaagsamayaa dhaqan xumadii cayayaanka CBB ee aad ka midka tahay ayaa caal loo layahay. Sidaa daraadeed waa danbiile mudan ciqaab adag sida in la daldalo.
Haddaan si qoto dheer u eegay khudbaddii Farmaajo, wuxuu body language kiisu sheegayaa oo ah wax aan laga been sheegi karin inuu yahay nin farka-naxsan oo cabdi iyo murugo ka muuqato, nin quus ah oo hankiisii oo jar ka laad laada arkay.
Wuxuu noqday nin daad qaaday xumbo cuskay, ciidan hab qabiil ku dhisan oo badhkood Ereteria lagu waayey oo aannu ka hadal ayuu wax arrin ah meesha keenay. Wuxuu ka hadlay dhallinyaro dhallinyaro isaga oo uga jeedaa in dhallinyarada lagu khaldi karo si fudud oo aanay fahmi karin khiyaanada iyo beentiisa waddaniyadda uu ka hadlayo. Dhallinyaradu waa ogtahay in aad cuntay Ikraan oo dhallinyaro 23 jir ah, diiddayna in caddaalad ay hesho, dalacsiiyey kuwii dilay.
Runtii waxay ahayd khudbad madhan oo aan lagu sheegi karin khudbad madaxweyne, waxay ahayd dardaaran kama dambays oo caddaynaya inuu meesha ka baxay, indhahiisa ayaa noo sheegayey quusta ka muuqata iyo cidlada uu taagan yahay. Farmajao wuxuu ka sii laad laadaa gebi, beentiisa iyo tan CBB midna kama soo saari karto godka uu ku dhacay. Galbataye Nasiibkaa
Taasaa la leeyahay ha israacdo!
Waxaa ugu murugo badan sida ay cadowga Soomaaliyeed Afkeenna naga badiya u daalacanayaan oo oddoroseynayaan halka ay Soomaalidu kala marayso iyo siyaabihii ay qummaati isuraacin lahaayeen oo mandiqaddeeda iyo kheyraadkeedaba uga dhaxalwareejisan lahaayeen.
Dad aad utashatay oo shilalkii aad ku bireyn lahaydba sii gogladay maxaa kafiican?
Majeerteen bari Wayne yaa soo yaacay
Waa wiil reer diini ah bacda dhuuqso
Kartidaas rag baa kudhalay
Yaa ibnul nijaas wada fudo waa weyn
ascwrwr aniga waxaan leeyahay soomaali makala maaranto nin siyaasi ahna waa danley danta guud iyo xaafadaha wararka yaal aan kala soocno
Speech culus oo meelo badan taabaneysa. 10 daqiiqo ka yar oo qiimo weyn xambaarsan. Nin hadal badan wax ma sheegin ( sida Md Deni) nin hadal yarna wax kama tagin. WELL DONE MR PRESIDENT.
Waar Ffarmaajo garasho kama aha debecsanaantan ee wuxuu soo taabtay weelka guntiisa. Wuxuu yaqiinsaday inaan waqti badan u harin == inuu
ku taagan yahay waddadii adeerkii Afweyne: sakaaratul mawdkii buu dareemay.
FARMAAJO Khudbaddiisan barbardhig tii AFWEYNE EE UU JEEDIYAY KA HOR MAALINTUU CARARAY.
Re: maqaalkaagii hore
Hadda waxaad naf bidday inaad isku daydo inaad isku dirto aniga iyo ustaad Awlal. Waan kaa shisheeynaa oo kaa sokeeynaa waanan ku faraxsanahay inaad sidaas naflacaari u tahay.
Anigu weligay ma aflagaaddayn beelweynta reer Sh. Isxaaq, ugumana yeerin naanaysta dadka qaarki ugu yeeraan. Waa jirtaa inaan mararka qaarkood ku tilmaamo Oromo amase jaarso, taasna waxaa macallin iigu ah oo aan ka bartay Xasan Cabdi Caynaanshe oo ah nin Isaaq ah oo dad badan yaqaannaan. Oromo waa qowmiyad ah 50 milyan oo muslim u badan, qofkii lagu sheego Oromana wax ceeb ah u keenimayso; Soomaali iyo Oromo waa walaalo, haddii aan Soomaali oo dhanba asal ahaan ahayn Oromo. Marka ragga qaarkiis lasoo shirtagaan faan iyo taariikhda oo ay ka beensheegaan waxaaa khasab noqonaysa in la sheego taariikhda dhabta ah mar mar ay ku kharaar tahay dadka qaarkiis inay liqaan.
Anigu waxaan difaacaa qaddiyadda Puntland State iyo xaqeeda ku salaysan dastuurka federaalka. Waxaan kasoo horjeeda goosashada Labo-jawaanley (Somaliland; waxaa u bixiyey magacaas C/Kariim Cali Nuur, afhayeenka Daarood). Waxaan taageersanahay doonitaanka ku salaysan midnimada Soomaaliyeed ee dadka SSC, Sanaag-bari, iyo Awdal. Waxaan ku riyoodaa Soomaaliweyn oo midowday.
Ugu dambeyn, waan ku faraxsanahay inaan sutida u qabtay adiga iyo inta kula midka ah oo isku daya inay websitekan usoo kortagaan markii ay qabato qarasta lagu yaqaanno Adna Aadan iyo Faysal Waraabe.
A.A.Xade – Qofka Mariam sitaa waa kuwii magacyada badnaa ee uu prof. Awlal kashifijiray; guul wadayaasha jeegaameysan ee SNM.
Marba magac bay soo waayaan sida Mubarak, Geelle, Runsheege, Ahmed Shiine, Laalays, Yoocada & qaarkaloo badan. Maantayse ugu daranyihiin, ganbay soo xidheen!
Haddaan madaxweynaha u soo noqdo, waxbaa Ka Jira oo sibuu u fiigsanyahay odaygu. Ma gabadhii Zeinaba ahayd baa hurdada ka soo jaftay oo soo kabaysay?! Ninkaasi nin la isugu tagay buu u muuqdaa; tol buu u baahantahay.
Mid baanse ogaaday, odaygii seedigiis ahaa ee “Xaad” ayaamahan gadaal buu u istaagay. Marka, waxa ay u muuqataa in isbahaysiga madaxweyne Farmaajo, Shariifka & Khayre ay wax Ka jiraan. Qayladii waxa ay isugu soo hartay “damma-jadiid & koox HG u badan.
Si kastaba, mar labaad waan bogaadinayaa khudbaddii qiimaha lahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya (Lawyacaddo illaa Liboye-Somalia). Waa madaxweynaha mandaqadda barakaysan ee SSC; AL-Darwiishiya.